तपाईं Paypal प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ पनि Clickfunnels साथ सँगै धारी - टुकी दिन
तपाईं आफ्नो वेब-आधारित व्यवसाय सेट छन् र तपाईं मान्छे आफ्नो सेवा भुक्तान गर्न विकल्प दिनु आवश्यक.
सुसमाचार तपाईं हो सफ्टवेयर देखि कम से कम समर्थन 15 फरक भुक्तानी gateways.
Paypal थप्दै तपाईं ठीक गर्नु हुनेछ कि तपाईंको बेचता मापदण्डहरू सिर्जना गर्न आफ्नो वेबपेजमा बटन सिर्जना गर्न र आफ्नो खाताबाट र टुकी भित्र सेटिङहरू एक नम्बर मा काम गर्न आवश्यक छ किनभने यो बिट थप जटिल.
धारी एकीकरण आफ्नो बाटो तपाईं केवल आफ्नो Clickfunnels एक एकीकरण लिंक सिर्जना गर्न आवश्यक देखि आफ्नो धारी गर्न खाता र तिनीहरूलाई दुवै मा एक प्राधिकरण प्रक्रिया आफ्नो व्यवसाय को नाम सेट अप सजिलो.
तेस पछि, तपाईं गरिन छौँ र आफ्नो ग्राहक तपाईं कमाउन दिनु एक विकल्प हुनेछ थप.
अन्तर्गत फाइल: Clickfunnels, Marketing Automation सँग ट्याग गरिएको: can you use paypal and also stripe together with clickfunnels